तन्दुरुस्ती र सौन्दर्यका लागि ग्रीन टी पिउनुहोस् :कति र कुन समयमा पिउँने जान्नुहोस् ! – kollywood hungama
तन्दुरुस्ती र सौन्दर्यका लागि ग्रीन टी पिउनुहोस् :कति र कुन समयमा पिउँने जान्नुहोस् !
काठमाडौं।अहिले नेपाली समाजमा पनि ग्रीन टी पिउने प्रचलन व्यापक बन्दैछ । खासगरी स्वास्थ्यप्रति सचेत बर्गले आफ्नो जिब्रोलाई ग्रीन टीमा अभ्यस्त गराउँदैछन् । दुध, चिनी र कमसल गुणस्तरको चियामा बानी परेका हामीलाई ग्रीन टीमा रस भिज्न अलि समय लाग्छ ।धेरैजसो बलिउड सेलिब्रेँ नियमित रुपमा ग्रीन टी पिउने गरेका छन्, तन्दुरुस्ती र सौन्दर्यका लागि । कति नेपाली सेलिव्रेँले पनि यसलाई आफ्नो नियमित खुराक बनाउने गरेका छन् ।
एन्टिअक्सिडेन्टको एकदमै राम्रो स्रोत हो, ग्रीन टी । यो एन्ँ अक्सिडेन्टल स्वास्थ्यका लागि एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । स्वास्थ्य र सौन्दर्य दुबैको लागि लाभदायक मानिन्छ । ग्रीन टीमा यस्तो पोषक तत्व पाइन्छ, जसले शरीरमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ ।यसमा एपिगलोकेटेशिन-३ गलेट पाइन्छ, जसले क्यान्सरको कोशिकालाई बढ्न दिदैन । रक्तचाप नियन्त्रण गर्नका साथै शरीरमा बोसो जम्न नदिन पनि यसको खास भूमिका हुन्छ ।
Previous विहानै खाली पेटमा भुलेर पनि नखानुहोस् यी खानेकुराहरू !
Next स्वास्थ्यका लागि पानी लाभदायक:एक दिनमा पानी कति पिउने ?कति बेला पिउने ?